Home - eOnlineKhabar
पत्नी महिनौ ननुहाउँदा पतिले मागे डिभोर्स
४ लाख फलोअर्स भएको साम्राज्ञीको इन्स्टाग्राम ह्याक
प्रसूति डाक्टर लताको अनुभूति : बच्चा जन्मिन लाग्दा भाग्थेँ
कल बाइपासविरुद्ध सीआईबीको अपरेशन ‘भोइस फक्स’, दुई भारतीय नागरिक समातिए
ढाड दुखेपछि आफ्नै वीर्यको सुई !
‘चौका दाउ’को व्यापार ६ लाख
हेटौंडामा खुल्यो प्रदेश यातायात कार्यालय
व्यापार सूचना प्रविधि
काभ्रेको पिन्थलीमा लघु जलविद्युतले ल्याएको परिवर्तनको कथा
बिस्कुट, चाउचाउको खोल सडकमा फाल्नेलाई ५० हजार जरिवाना
घर तोडफोड र चोरी अभियोगमा ४ जना पक्राउ
एकजना ३३ वर्षका युवकका बारेमा एउटा पत्याउनै नसकिने खालको घटना बाहिर आएको छ । ढाड दुख्ने समस्याबाट पीडित ती युवकले दुखाईको उपचार आफै खोज्ने प्रयास गरे । तर उनको प्रयासको नतिजा निकै घातक बन्यो । ढाड दुखाइको उपचारका लागि उनले असामान्य उपाय अपनाए । आयरल्याण्डको मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित उक्त रिपोर्ट अनुसार डब्लिनस्थि टालघाट विश्वविद्यालय अस्पतालमा […]
केटी पाउने चक्करमा जहाँका केटा सडकमा नांगै घुम्छन
साँढेका लागि जिन्दगी भर बिहे नगर्ने यी महिला
१० वर्षपछि सामूहिक बलात्कारका मुख्य दोषी पक्राउ
यस्तो देश, जहाँ अपराधीको ‘पूजा’ हुन्छ
माघ ९, तुलसीपुर । तुलसीपुरबाट विभिन्न घरमा तोडफोड र चोरी गरेको अभियोगमा चार जना पक्राउ परेका छन्। ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसी प्रेमबहादुर शाहीले तुलसीपुर बजार र आसपासको क्षेत्रमा केही समययता हुँदै आएको घर तोडफोड तथा चोरीमा संलग्न रहेका चार जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए। डिएसपी शाहीले सोमबार दिउँसो २ बजेतिर खर्चवा गाउँ […]
इराकमा गुर्खालीमाथि एउटा बुढो प्रश्न !
ड्याम्म बम पडि्कयो । अहिले म बङ्करमा छु । ‘इन कमिङ’को एकोहोरो साइरन अझै पनि फुकिरहेको छ मेल्ट्रीपुलिस । म कसरी बङ्करमा आइपुगे ? सोचिरहेको छु । ज्यानको माया सबैभन्दा बढी नहुँदो त म अझै नेपालमा ममीसँग कुरा गरिरहेको हुन्थे फोनमा । टिम भन्छ, यो उसको पहिलो पटक हो बङ्कर बसाई । मेरो हाकिम हो […]
म साउदी अबरबाट किन भागें ?
१८ बर्षकी राहफ मोहम्मद अल-कुननको सन्दर्भमा तब विश्वको ध्यान खिचियो, जब उनी बैंककको हवाई हड्डामा स्वयम्लाई एक कोठामा बन्द गरिरहेका थिए । र, र्फकनका लागि अस्विकार गरिरहेकी थिइन् । उनी साऊदी अरबमा आफ्नो परिवार छाडेर आएकी थिइन् । साथै ट्वीटरमा उनका समर्थनमा एक अभियान चलाइएपछि उनलाई क्यानडामा आश्रय दिइएको थियो । यो घटनापछि साऊदी अरबमा […]
चलचित्र असफल भयो भने कतिसम्म विजोग तरिकाले हुन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, ‘चौका दाउ’ । यो चलचित्र पौष २७ गतेबाट रिलिज भएको थियो । यो चलचित्रले काठमाण्डौका हलबाट जम्मा ६ लाखको शेयर दिएको छ । चलचित्रका लागि यसका वितरक गोपालकाजी कायस्थले निर्मातालाई १६ लाख दिएका थिए । तर, चलचित्रले ६ लाख पनि मुश्किलले उठाएपछि वितरक […]
नयाँ सिनेमामा यस्तो देखिदैंछन् सुनिल शेट्टी
बलिउड अभिनेता सुनिल शेट्टी मल्यालम सुपरस्टार मोहन लालको नयाँ सिनेमा देखिने भएका छन्। दुबै जना सँगै काम गर्न लागौको यो पहिलो अवसर हो। सुनिल मोहनलालको नयाँ सिनेमा ‘मराकर: अराविकदालइन्ते सिम्हम’मा एक योद्धाको भूमिकामा देखिनेछन्। सिनेमाको सुटिङ् गत साताबाट हैदरावादको रामाजी स्टुडियोमा सुरू भइसकेको छ। सुनिलले आफ्नो ट्वीटरबाट सिनेमामा हुने आफ्नो पात्रको स्वरूप सार्वजनिक गरेका छन्। […]
‘दि ब्रेकअप’ ट्रेलरः आशिरमान र शिल्पाको रोमान्स र विछोड
निर्मात्रीलाई किन हेप्छन् पुरुष निर्देशक ?
कमेडी फिल्म गर्दै आर्यन
कलाकारहरुको लोकप्रियताको मापन चलचित्रको व्यापारले मात्र हिजोआज गर्दैन । कलाकारहरु सामाजिक संजालमा कति लोकप्रिय छन् भन्ने कुराले पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । यसैले पनि सामाजिक संजालमा फ्यानसँग जोडिएर कलाकारहरु आफ्नो दैनिकी अपडेट गराइरहेका हुन्छन् । नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी चर्चित नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा लोकप्रिय छिन् । उनलाई इन्स्टाग्राममा करिब ४ लाखले फलो […]
९ माघ, काठमाडौं । भीओआईपी प्रयोग गरेर अवैध कल बाइपासमा संलग्न दुई भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले अपरेशन भोइस फक्समार्फत राजस्थानका ३५ वर्षीय सुनिलकुमार र रामकरण जतलाई पक्राउ गरेको हो । ब्यूरोका एसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरुले काठमाडौं–२६, सामाखुशीमा नवराजविक्रम कुँवरको घरको कोठा भाडामा लिएर […]
अब ह्वाट्सएपमाको मेसेज फरवार्डमा बन्देज
हुवावे काण्डमा के हुँदैछ ?
भारतले अन्तरीक्षमा जनावर होइन, रोबोट पठाउने
अपाङ्गता भएका बालकको स्याहारमा कठिनाइ
घनिष्ठ साथीलाई पनि नसुनाउनुहोस् यी सबै कुरा
a333 commented on छोरी जन्मे १ लाख बिमा: It may sound like there plenty of resource materia
joker 123 commented on छोरी जन्मे १ लाख बिमा: It is always his will this also be cooked. Before
online casino zambia commented on छोरी जन्मे १ लाख बिमा: They focus too much on producing articles that are
Uncategorized खेलकुद जीवनशैली देश मनाेरञ्जन विचार विचित्र स‌सार विदेश व्यापार सूचना प्रविधि स्वास्थ्य
© eOnline Khabar	|
Theme: eOnline Khabar by Arenasnote
Add eOnlineKhabar to your Homescreen!